पूर्व प्रधानमन्त्री डा. गिरीको बिदाई, एउटा युगको अन्त्य – Mission Khabar
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. गिरीको बिदाई, एउटा युगको अन्त्य
मिसन खबर ४ पुष २०७५, बुधबार १५:४०
काठमाडौं–पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरी अब भौतिक रुपमा हामीमाझ रहेनन् । बुधबार पशुपतिस्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा गिरीको अन्त्येष्टि गरिएको छ । ९३ वर्षको उमेरमा मंगलबार बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा निधन भएका गिरी पूर्वप्रधानमन्त्री मात्रै थिएनन्,पञ्चायत युगका एक होनाहार हस्ती थिए । राजका हरेक कदममा साथ दिने एउटा बफादार सिपाही भएको बताइन्छ ।
हुनपनि गिरी जुन बेलामा प्रधानमन्त्री वा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाइन्थे त्यतिबेला पूर्व राजाकै साथ रहन्थ्यो । गिरीले पनि राजतन्त्रमा राम्रो साथ दिएको जानकारहरु बताउँछन् । बिक्रम सम्वत उन्नाइस सय ८३ सालमा सिराहामा जन्मिएका डा. गिरी ३६ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्ने इतिहासकै कान्छा प्रधानमन्त्री पनि हुन् । २०१७ सालमा निर्बाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि तत्कालिन राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालालाई हटाएर २०१९ सालमा गिरीलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । २०३२ सालमा दोस्रो पटक उनी प्रधानमन्त्री बने ।
प्रखर पञ्च रहेका गिरी पञ्चायत कालका एउटा जीवन्त इतिहास मात्रै थिएनन्, नेपाली कांग्रेसको पहिलो पुस्ताका प्रबल नेता पनि थिए । खरो राजनीतिक स्वभावका गिरीले पञ्चायत अघि नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीवाट राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका थिए । कांग्रेसको पहिलो पुस्ताका नेता, पञ्चायतकालका हिमायती बन्दासम्म शक्तिशाली राजा पक्षधर नेता बनेका गिरिले तात्कालिन राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा गर्दा भने धोका दिएको कतिपयको आरोप छ । यतिबेला उनी मुलुक छाडेर श्रीलंका गएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि पुनः २०५९ सालमा स्वदेश फर्केका गिरी ज्ञानेन्द्र सरकारको मन्त्रीपरिषद्को उपाध्यक्ष बने ।
सधै राजतन्त्र निकट रहेका गिरी गणतन्त्रपछि भने नेपाली राजनीतिबाट अलग्गै रहेका थिए । डा. तुलसी गिरीको निधनले एउटा युगको अन्त्य गराएको छ । यो युग हो पञ्चायत ।